မေဖန်ဆင်းတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်: အလွမ်းတွေ
Posted by မေ့သမီး at 9:11 PM
ငါ့ညီမလေး ဆေးရုံကဆင်းလာပြီး အားငယ်နေတယ်ထင်ပါ့၊ စိတ်ကို ၀မ်းနည်းစရာတွေ သိပ်မတွေးနဲ့လေ၊ စိတ်အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်အောင် တခုခုလုပ်ပေါ့၊ ညီမလေး အမြန်ဆုံး ကျမ်းမာပျော်ရွှင်လာပါစေ။
အဲ့ဒါ ဘယ်နိုင်ငံ လဲ ဟင်...
စိတ်လဲ ညစ်မနေပါနဲ့ .. ပျော်အောင်နေနော်..း))
သံယောဇဉ် ထားတတ်သူတွေမှာတော့ အရာရာဟာ အလွမ်းတွေ ချည့်ပါလေ...။
ကိုယ်ပြောချင်တာလေးတွေ စကားပြောသလို အေးအေးဆေးဆေးပြောပြသွားတာ မေ့သမီးရဲ့ ရိုးသားတဲ့ရေးဟန်ပါ ။
hi.. can u write how did u try to get this scholarship together with website links? thanks..
Scholarship အကြောင်းကို အချိန်ရရချင်း ရေးပေးပါ့မယ်နော်။ အကိုတွေ၊ အမတွေအားလုံး ကျေးဇူးပါ။
မေ့သမီးရေးတာတော်တော်လေးကို ခံစားသွားရတယ်...နောင့် လဲ အဲ့လို လွမ်းဖူးတယ်.... အရမ်းခံရခတ်တာပါပဲ...အရမ်းလွမ်းနေပြီး တွေ့ခွင့်မရှိလို့ ထင်ထားတဲ့လူကို အဲ့ဒီလိုလွမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာ မြင်လိုက်ရရင်ဖြင့်နော်.... အရမ်း အရမ်းကို ပျော်စရာကောင်းမှာပဲ....။း) ဒါပေမယ့် လွမ်းတာလေးတွေကို ဘလော့လည်တာလေးနဲ့ ဖြေသိမ့်လိုက်လေ....နော်..။
ကျနော်လဲ ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ ၀င်လွမ်းသွားမိတယ်။ အင်းးးးး။ =)
မမ ကို ကျတော့ မလွမ်းနဲ့လေ လာပြောပြီး
သူ က လွမ်းနေတယ်..း)
ကဲ တူတူ မလွမ်းကြကြေး ကွာ ..နော်
ဟုတ်တယ်။ လွမ်းတယ်။ ထပ်တူထပ်မျှပဲ။